Fadeexad ka taagan wafti ay DFS u dirtay shirka shaqaalaha adduunka - Caasimada Online
Home Warar Fadeexad ka taagan wafti ay DFS u dirtay shirka shaqaalaha adduunka
Fadeexad ka taagan wafti ay DFS u dirtay shirka shaqaalaha adduunka
Muqdisho (Caasimadda Online) – Iyadoo lagu wado in 28ka bishan May magaalada Geneva ee dalka Switzerland uu ka furmo shirka shaqaalaha Aduunka oo ay soo qabanqaabisay hay’adda ILO, ayaa dhinaca kale waxaa soo baxaya eedeymo la xiriira habka dowladda Soomaaliya ay u maamushay wafdiga uga qeybgali doona shirka dhinaca Soomaaliya.
Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta dowlad gobolleedyada dalka oo xiriir la soo sameeyay Caasimadda Online ayaa sheegay in dowladda federaalku si aan habooneyn u maamushay wafdiga shirkaa uga qeybgali doona Soomaaliya.
Nuqul ka mid ah qoraalka wafdiga Soomaaliya ku matali doona shirka oo ay heshay Caasimadda Online ayaa muujinaya in marka laga soo tago wafdiga dowladda dhexe ee Soomaaliya Puntland oo kaliya ka qeybgali doonto shirka oo uu ku matali doono Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle iyo Agaasimihiisa Wasaaradda sida ku xusan Qoraalka oo uu ku saxiixan yahay Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha dowladda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac.
Shirka oo noqonaya kii 107aad ayaa marka guud ahaan la eego dowladdaha ka qeybgali doona waxaa uu qorshuhu yahay in ay ku matalaan Dowlad waliba Saddex qeybood oo kale ah wafdi ka socda Dowladda, Shaqaalaha iyo loo Shaqeeyayaasha oo qeyb-walba ay tahay in ay iyaga iska soo dhax xulaan wakiilada shirka ku matalaya.
Mas’uuliyiintan ka tirsan dowlad gobolleedyada ee Caasimadda Online la soo xiriiray ayaa sheegay in arintan lagu tilmaami karo musuq-maasuq weyn oo dowladda dhexe ay ku sameysay ka qebgalka shirka madaama aan la siin dowlad gobolleedyada iyo Ururrada kale ee kulankani quseeyo mudnaantii ay lahaayeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa marka ugu danbeysa wax cod ah ku yeelan doonin dooddaha iyo Ajandayaasha shirka, taasoo ka dhiggan in kulan-weynaha ka furmi doona Geneva muhiimad gaar ah u yeelan doonin Soomaaliya.